Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 45
Inona no ilaina amin'ny fitomboana?
Eritrereto ny fomba tsara indrindra hanompoana an'izany izay anoloran-tena sy hiasa amin'izany.
Ny fifikirana dia toe-tsaina na fisainana iray mankany amina fitsipika iray, antony, maha-olona na olona iray, ary fahavonona hiasa amin'ny fahafaha-manao izay anoloran-tena. Ny fitomboan'ny fanoloran-tena dia miankina amin'ny fahafahan'ny olona manao sy manompo ary mitombo ny fahaiza-manao amin'ny alàlan'ny fiheverana azy. Ny toetra manokan-tena dia manery ny olona iray hampiseho ny fitiavany azy amin'ny fanaovana zavatra maneho ny maha-izy azy. Io tsikombakomba amin'ny fahafoizan-tena io dia tsy miteraka vokatra tsara indrindra, na izany aza, na dia tsara indrindra aza ny finiavana, ny zavatra natao dia mety hanimba ny zavatra nanaovana azy.
Ny toetran'ny fombafomba dia avy amin'ny fo. Ity hetsika avy amin'ny fo, na dia fanombohana tsara aza, tsy ampy amin'ny fitomboana. Ilaina ny fahalalana ilaina amin'ny hetsika hendry. Ny lehilahy manana toe-tsaina mpivavaka dia matetika tsy mihaino ny saina alohan'ny hanaovan-javatra, fa aleon'izy ireo hanaraka ny didy jadona na ny ao am-pony. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny saina ihany no ahazoana ny fahalalana. Ny tena fitsapana ny fahafoizan-tenan'ny olona dia ny fandalinana, ny fisaintsainana, ny fiasan'ny saina amin'ny tombontsoam-pahasoavana mahasoa izay natokanany. Raha mihemotra amin'ny fihetsiky ny fihetseham-po ny olona iray ary tsy mieritreritra amim-paharetana sy maharitra, dia tsy manana fifikirana marina izy. Raha maharitra amin'ny fampiharana ny sainy ny olona manana toe-tsaina tia karokaroka ary mahazo hery hieritreretana mazava dia hampiditra fahalalana ao amin'ny fanoloran-tenany sy ny fahafahany manompo izay efa notompoiny.
Inona ny karazana zava-manitra, ary hafiriana no nampiasana azy io?
Ny endriky ny emboka manitra ny tany. Ny Tany, izay iray amin'ireo singa efatra dia mifanentana amin'ny fahatsapana fofona. Ny ditin-kazo manitra dia fifangaroana manitra misy menaka, zava-manitra, menaka, vovoka, kitay izay mandritra ny fandoroana dia manome fofona mahafinaritra amin'ny fofony.
Ampiasaina ny zava-dratsy alohan'ny nanombohan'ny nanoratana ny andrim-panjakana, fombafomba ary hetsika. Betsaka ny soratra masina miresaka momba ny ditin-kazo manitra raha ilaina amin'ny asa fanompoana amin'ny fanompoana. Ny ditin-kazo manitra dia nampiasaina tamin'ny fombafomba momba ny sorona ary ho fanomezana, porofon'ny fifikirana nataon'ny mpivavaka ary mpivavaka izany. Ao amin'ny soratra masina maro, ny fanolorana ditin-kazo ho toy ny andriamanitra mivavaka dia mamaritra ny halavany lavitra, ary ny fitsipika nomena ho an'ny karazana emboka manitra, ny fanomanana sy ny fandoroana azy.
Misy tombony azo avy amin'ny fandoroana ny emboka ve, mandritra ny fisaintsainana?
Ny tombony dia azo avy amin'ny fandoroana ditin-kazo manitra mandritra ny fisaintsainana, momba ny tontolo ara-batana sy astral. Ny fandoroana emboka manitra dia tsy hahatratra mihoatra ny tontolon'ny astral na psychic. Ny fandoroana emboka manitra dia tsy manampy ny fisaintsainana momba ny lohahevitra momba ny tontolo ara-tsaina na ara-panahy.
Raha misy olona manome fankatoavana ny herin'ny tany lehibe sy fanahy kely kokoa, na izay zavaboary rehetra amin'ny tany, dia mety hahazo tombony amin'ny fandoroana ditin-kazo manitra izy. Mahazoa tombony azo izy ireo. Manome sakafo hamelomana ny olombelona vatana ny tany. Mamelona ny zavaboarin'ny tany sy ny zavamananaina ny zavamisy ao anatiny. Tanjona roa sosona ny fandoroana emboka. Manintona sy mametraka fifandraisana amin'ny biby irina izy io ary mandroaka zavaboary hafa izay tsy ahalavorary ny ditin-kazo manitra. Raha maniry ny fisian'ny fitaoman-javatra sasany ny olona, ​​dia ny fandoroana emboka manitra dia mety manampy amin'ny fisarihana ireo fitaomana ireo sy ny fananganana fifandraisana. Na izany aza, raha tsy mahalala ny toetoetran'ny emboka izay ampiasainy ny olona iray ary tsy mahalala ny toetoetran'ny karazana hery na ny faniriany, dia hahazo izany izy fa tsy tombontsoa, ​​inona no tsy mendrika sy manimba. Ity dia mihatra amin'ny fisaintsainana momba ny tontolo ara-batana sy astral na psychic, ary amin'ireo zavatra mahatsiravina.
Raha misaintsaina mafy momba ireo lohahevitra ara-tsaina sy ara-panahy dia tsy ilaina ny fandoroana ditin-kazo manitra. Ny fisainana sy ny toe-tsaina irery ihany no manapa-kevitra hoe inona avy ireo fitaomana tokony ho manodidina ary inona no asehon'ny olona eo amin'ny fisaintsainana ara-tsaina sy ara-panahy. Ny fandoroana emboka manitra matetika dia mitazona ny saina amin'ny zavatra manindry ary manakana azy io tsy hiditra amin'ny endrika abstraction ilaina amin'ny fisaintsainana momba ny tontolo ara-tsaina sy ara-panahy.
Azo jerena amin'ny lafiny rehetra ve ny vokatry ny fandoroana emboka manitra?
Izy ireo dia. Miankina amin'ny herin'ny mpandraharaha ny fampahalalana momba ny foto-keviny, ny hita maso sy ny fihetseham-po mahatsiravina hafa. Ny setroka sy setroka nipoitra avy amin'ny ditin-kazo manitra dia manome tanjaka sy vatana ara-nofo izay tadiavin'ny biby sy fangatahana. Izany no iray amin'ireo antony nahatonga ny mpanao ody sy ny necromance nampiasa ditin-kazo manitra tamin'ny nanafika sy ny fimailoany. Amin'ny alàlan'ny fandoroana ny ditin-kazo manitra dia vokarina amin'ny planina hafa fa tsy ny ara-batana, fa ny olona iray dia tsy maintsy manana fiaran-tsaina ara-tsaina sy eo ambany fifehezan'ny sainy mba hahitana izany. Avy eo hahita ny fomba sy ahafantarany ny antony mahasarika ny olona sy ny zavaboary izy, na ny fandoroana ditin-kazo manitra, ny fiantraikany amin'ny olona manolotra ditin-kazo manitra, ary ny vokatra hafa mandeha amin'ny fandoroana ditin-kazo manitra.